RASMI: Xiriirka CONMEBOL oo xaqiijiyey in la joojiyey oo lagu kala dareeray kulankii u dhexeeyey xulalka Brazil iyo Argentina daqiiqo yar kaddib markii la baastay… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
RASMI: Xiriirka CONMEBOL oo xaqiijiyey in la joojiyey oo lagu kala dareeray kulankii u dhexeeyey xulalka Brazil iyo Argentina daqiiqo yar kaddib markii la baastay… (Maxay tahay sababtu?)
(Brazil) 05 Sebt 2021. Xiriirka CONMEBOL ayaa xaqiijiyey in la joojiyey oo lagu kala dareeray kulankii u dhexeeyey xulalka Brazil iyo Argentina wax ka yar 10 daqiiqo kaddib markii kulanka la baastay.
Daqiiqadihii ugu horreeyay ee kulankii ka tirsanaa isreeb -reebka Koobka Adduunka 2022, oo ay Brazil soo dhaweysay Argentina ayaa waxaa ka dhacay fowdo.
Dawadayaasha kulankan ayaa la yaabay faragelinta wakiil ka socday mas’uuliyiinta wasaarada caafimaadka ee dalka Brazil oo ku sugan garoonka ay ciyaarta ka dhaceysay ee Neo Quimica Arena si ay isugu dayaan inay garoonka ka saaraan tiro ciyaartooy reer Argentina ah.
Mas’uuliyiinta wasaarada caafimaadka ee dalka Brazil ayaa waxay u arkeen kuna eedeeyeen afar ka mid ah xiddigaha xulka Argantina inay jabiyeen xeerarkii lagu xadidi lahaa faafitaanka caabuqa Korona Fayras.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargayska “The Guardian” ee dalka England, afarta ciyaartoy reer Argentina ayaa waxay ka imaadeen horyaalka Premier League, kuwaasoo kala ah Emiliano Martinez, Emi Buendía, Giovanni Lo Celso iyo Christian Romero, iyaga oo dhamaantood aan lagu soo dhaweynin Brazil, maadaama sharciga uu dhigayo in dadka ka imanaya Ingiriiska ay soo galaan karantiil muddo 14 maalmood ah, mana lagu dhaqmin.
Warbixin uu daabacay wargayska “AS” ee dalka Spain ayaa soo xigtay bayaan uu soo saaray Antonio Barra Torres, oo ah madaxa Hay’adda Ilaalada Caafimaadka Qaranka Brazil, kaasoo sheegay:
“Afarta ciyaaryahan waa in laga masaafuriyaa Brazil, waa la ganaaxi doonaa haddii aysan u hoggaansamin xeerarka caafimaadka Brazil.”
Si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii waxaa la go’aamiyay in gabi ahaanba la joojiyo ciyaarta u dhaxeysay xulalka Brazil iyo Argantina, taasoo qeyb ka aheyd isreeb -reebka Koobka Adduunka 2022.